यो हो आँखाको दृष्टि बढाउने सरल उपाय
निर्वाचन विशेष साइटमा जानुहोस्
काठमाडौं, २६ असोज — तपाईं आँखाको दृष्टि बढाउनका लागि उपायहरू खोज्दै हुनुहुन्छ ? आँखा कमजोर छन् भने त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि सरल र प्राकृतिक अभ्यासको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यहाँ बताइएका उपाय अपनाउनुभयो भने तपाईंले चश्मा प्रयोग नगरिकनै दृष्टि बढाउन सक्नुहुन्छ ।
खासमा कुनै मांसपेशी प्रयोग गरिएन भने त्यो कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसैले आँखाको मांसपेशीलाई पनि व्यायामको मौका दिनुपर्छ ।
आँखालाई लगातार काममा दिनभरि लगाइरहनु हुँदैन । प्रत्येक दुई घन्टामा केही मिनेटका लागि आँखा बन्द गर्नुस् ।
माथि दिइएको चित्र अनुसारको अभ्यास क्रमैसँग गर्नुस् ।
चश्मा लगाउनुहुन्छ भने लगाउने समय घटाउनुस् । चश्माले हाम्रो आँखाको प्रयासलाई प्रायः घटाउँछ । त्यसैले दृष्टि बढाउनका लागि सकेसम्म चश्मा खोल्नुस् ।
गाजरको जुस दिनदिनै सम्भव भएसम्म पिउनुस् । थप फाइदाका लागि तपाईंले जुसमा जैतूनको तेल पनि हाले हुन्छ । यसो गर्दा गाजरका पोषक तत्त्व तपाईंले सोस्न सक्नुहुुन्छ ।
माथि चित्रमा बताइएअनुसार आँखाको मालिश गर्नुस् । माझी औंलो र चोर औंलोले मालिश गर्नुहोला । मालिश गर्दा हल्का मात्र दबाब दिनुहोला ।
खुल्ला हावामा हिँड्दा टाढातिर दृष्टि फ्याँक्नुस् । आफ्नो खुट्टामा हेर्नुभन्दा परका कुरा हेर्नु ठीक हुन्छ ।
आँखालाई मनतातो पानीले धुनुस् । यसो गर्दा आँखाको थकाइ मेटिन्छ र तपाईं ताजा महसूस गर्नुहुन्छ ।
ल्यापटप वा टिभीमा घन्टौं नझुण्डिनुस् । राति सुत्नुअघि स्मार्टफोन नहेर्नुस् अनि राति निद्रा खुल्यो भने स्मार्टफोन हेर्न नथाल्नुस् ।
त्राटक गर्न थाल्नुस् । तर १२ देखि १५ मिनेटभन्दा बढी नगर्नुस् ।
एजेन्सीको सहयोगमा असोज २६, २०७४ मा प्रकाशित
दाँत दुखेर हैरान हुनुभएको छ ? यसरी ठीक पार्नुहोस्
यसरी लाग्छ मधुमेह, सुगरबाट बच्न डा. जोशीले दिए यस्ता सुझाव
पेटमा कसरी जम्मा हुन्छ ग्यास ? बच्ने कसरी ?
किन गनाउँछ मुख ? यसरी राख्नुस् मुख र दाँत स्वस्थ
जाडो याममा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता काम, बिरामी परिएला
प्रदेशसभामा विजयी भएका चर्चित अनुहार काठमाडौं, २७ मङ्सिर - प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम आएसँगै प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको छ । निर्वाचनमा होमिनुअघि नै प्रदेश मुख्यमन्त्री दाबी...
ओलीलाई ३० किलोको माला
चुनाव जितेर सनसनी मच्चाएका रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन
कैलाली २ मा पनि एमाले नै विजयी, पुग्यो ८० सिट
प्रदेश राजधानी : चर्चामा कुन- कुन ठाउँ ?
१६४ निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक
भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा बधाई हतार होला, अहिलेलाई शुभकामना दिनुस् : केपी ओली [भिडियो अन्तर्वार्ता] पूरा पढ्नुहोस
यसपटक बाग्लुङमा कांग्रेसको गढ ढाल्दैछौं : देवेन्द्र पौडेल [अन्तर्वार्ता] पूरा पढ्नुहोस
अन्तैबाट उठ्न प्रस्ताव आएपनि ज्युँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी सम्झेर काठमाडौं–५ नै रोजें: ईश्वर पोखरेल [अन्तर्वार्ता] पूरा पढ्नुहोस
नयाँ मोडमा मुलुक, पूरा होलान जनताका अपेक्षा ?
- श्रीकान्त रेग्मी पूरा पढ्नुहोस
जनताले वामपन्थी गठबन्धनलाई दिएको अन्तिम मौका
- सुदर्शन बराल मगर पूरा पढ्नुहोस
नेपालमा औपनिवेशिक लेखनको जालो : विदेशीको गीत गाउँदै नेपाली लेखक
- कमल बहादुर महत पूरा पढ्नुहोस
Dec. 11, 2017, 2:11 p.m. निर्वाचनपछिको नेपाल : के मुलुक अँध्यारो सुरुङबाट निस्केकै हो ? पूरा पढ्नुहोस
Dec. 6, 2017, 6:16 p.m. युग बनाउने दिन, अपार सफल पारौं (विशेष सम्पादकीय) पूरा पढ्नुहोस
Nov. 26, 2017, 10:31 a.m. ‘महान् उपलब्धि’ का घातक परिणति नआउन् पूरा पढ्नुहोस
अनिल थापा (अर्घेलो)
इमेल : info@lokaantar.com, lokaantarnews@gmail.com
Copyright © 2017 - Lokaantar Sanchar. Powered by